शब्दकोश: काठमान्डू !
अन्सारी । पर्साको तराई समुदायमा जन्मिएको र त्यहीँको वातावरणमा हुर्किएको फलस्वरूप मातृभाषा भोजपुरी भए पनि हिन्दी भाषाको पकड पनि छँदैछ । नाम जस्तै अनौठो प्राणी छ गनी । पहिलो पटकको चिनापर्चीमा कतिपयले उसको नाम ‘गणित’ पनि बुझिदिन्छन् ! त्यसमा ऊ संशोधन विधेयक पेश नगरी फिस्स हाँसिदिन्छ । अँ, हाँस्ने कुरामा अचेल ऊ अलि बिखर्ची जस्तै भएको छ, अथवा भनौं न भरिपूर्ण भएर पनि – मितव्ययी । बुढेसकालमा दम्पती सुखमा खुब निमेकले बाती काटे जस्तै मुस्कानको लहरा मुहारको मुजाभरि तान्न उसले अहिले हाँसो जोगाएको हो ?
अनौठो प्राणीको कु रा निस्किहाल्यो, स्थानीय मादकतामा लट्ठिन छाडेर सीमापारका आँखाहरूसम्म अनलाइन चरामार्फत मोहनी जाल बिछ्‌याउँछ । स्वदेशी केटीहरू उसको प्रेमका योग्य छैनन् ? युवासुलभ जोस, जिज्ञासा र जीवनभोक उसमा चुली छ । जीवनलाई हदै चिल्याऊँ भन्ने धुनमा एकसुरिएको हुन्छ दिनको हरेक घन्टा, मिनेट र त्यसभित्रका खुजुरा सेकेण्डहरूमा । जीवन चिल्याउने खाक्सी के चाहिन्छ खासमा ? ऊ सँग तालिम लिन छुटेको कुरा यही हो मैले । “टेन्सन छ”, निधार खुम्च्याउँदै भविष्‍यको आरोह र अवरोहको ज्वरोमा डुबेर थेगो जस्तै बोल्न ऊ कहिल्यै छुटाउँदैन । यो टेन्सनको बच्चो मानौं अनिच्छित गर्भबाट फुस्किन पुगेको सन्तान हो, कस्तै भीड छिचोलेर पनि जन्मदातालाई पैल्याउँदै ढ्याप्प काख हडप्न आइहाल्छ ! स्वाभिमानको बुई चढेर आत्मसम्मानमा सयर गर्ने आजका युवा पुस्ताको साझा गुण उसमा पनि भरपूर छ । भेट हुँदा अफिस र घरमा कसलाई कसरी तह लगायो, कुनै बहादुरी साबित गरे झैं बेलिविस्तार लगाउँछ । हुन पनि हो, खुला दिलले हाकाहाकी मान्छेहरूको सामना गर्ने र साँचो कुरामा हक्की भई सामुन्नेको ठालु मान्छेलाई पनि नाक थेप्च्याइदिने अहिलेको समयमा कति पो छन् र ? सबैजसो जसोजसो पुरेतजी, उसोउसो स्वाहाको चक्कर लगाउनैमा सहजता पाउँछन्, आफ्नो दुनो सोझिने प्रविधि पनि त्यसमै त छ !
गनी अन्सारीलाई मैले पात्र बनाएर यसरी चर्चामा उभ्याउनुको कुनै सन्दर्भ छैन । न ऊ कुनै प्रतिष्ठित केन्द्रबाट वर्ष व्यक्ति घोषित, न कुनै पुरस्कार र पदवीबाट उचालिएको । त्यसो त ओझेलमै राखिरहनुपर्ने भूमिगत गिरोह पनि होइन ऊ । अझ ऊ त मुलुककै राजधानी सहर, जसलाई उसले आफ्नो गजलमा समेत महत्त्व दिंदै उल्लेख गरेको छ । काठमान्डू ! उसको काठमान्डू आगमन आम युवाको सपनाको खेती जस्तै साझा सुर हो । चाहे सारेगमको सरगम कुन मोडमा मिलोस्-नमिलोस्, अनिश्‍चयमै पर्साबाट राजधानी खाल्डोमा अवसरको तार छुन आइपुग्यो ऊ । यसबीचमा उसले यो खाल्डोमा हानेको बल्छीमा कति माछा पर्‍यो ? बल्छी हुर्‍याउने क्रममा कतै आफैं त रगतपच्छे भएन ऊ ? जिल्लाको दूरदराजको ठिटो, त्यसमा पनि अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत मुस्लिम परिवारको बच्चो, निरक्षर बाबु-आमाले जसोतसो गरी पढाए । बाबु-आमा भनेका त्यस्तै हुन्, सन्तानलाई अग्ल्याउन आफ्नै हातको खराउ बनाइदिने ! उफ !! धन्न अरु कतिपय सन्तान जस्तो कृतघ्न भएन गनी, दु:खले कटकटिएको घरबूढा र बूढीको कमिज-लुङ्गी र चाल्नो साडी देखेको छ । यसैले मौका पर्दा दिल खोलेर सुकसुकाउँछ पनि यदाकदा । काठमान्डूको प्रदुषण पखालिएर जाने भए थप आँसु बगाउन उसलाई आपत्ति हुने छैन, यति सहृदयी ऊ पक्का छ । पिलपिलाउनेहरू अरूको वेदनामा पग्लिन्छन् र त कतिपय अवस्थामा गलत रूपमा प्रयोग पनि हुन्छन् ।
देशभर र इन्टरनेटको सागरसम्म फैलिने राष्‍ट्रको रेडियोमा चार वर्षभन्दा बढी ‘पुस-अप’ गर्‍यो गनीले । तर बडी उसको फुलेन ! साहुजीको मात्र गाँठिंदै गयो । आखिरमा घोटियो-घोटियो हात लाग्यो शून्य जस्तो । लुटी ल्यायो भुटी खायो उही ज्यामी र मजदुरको दिनचर्या भयो । भान्सा तीतो भएपछि पिर्का छाडेर उठिन्छ, गनी अघाएर उठ्यो आखिरमा । काठमान्डूमा रहँदा-बस्दा अघाए पनि झ्वाट्ट विकल्प नदेख्दा निरुपाय काठमान्डूकै गौंडामा थुनिएका कैयौं युवा जस्तो उसको पनि नियति भएको हुनुपर्छ । राजधानी लगायतका सुविधासम्पन्न सहर अवसरको ढडिया थाप्न उपयुक्त नदी हुन्, किनारा त आखिर आफ्नै जिल्ला र गाउँठाउँ हो । अस्थायी किल्लामा आखिर केही समय त हो लडाइँको मोर्चा खुँद्‍ने, फिर्ती सवारीको ढोका खोलेर जिल्लामा घरपरिवार बसिरहेकै हुन्छन् । तर जति उफ्रिए पनि कान्लामुनिको भ्यागुतामा किन परिणत हुन्छन् आखिर सहरमा गाउँका मान्छे ? एउटा गाउँले सहरबासी भए पनि सहरिया कहिले हुन सक्ला ? बहसको विषय हुन सक्छ ।
अध्ययन तथा कामकाजी जीवनमा सङ्घर्ष गर्दागर्दैको सहर छाडेर गाउँ फर्किँदा त्यहाँ आफ्नो आधार बनाउन फेरि शून्यदेखि मेलो सार्नुपर्ने हाउगुजीले पनि हामीलाई सताउँछ । फर्केर गाउँमा छाडिएको आफ्नो पुरानै स्थितिबाट आफूलाई डोर्‍याउन तयार कत्तिको हुन सक्छौं हामी ? सहर ढुक्कको थलो लागे पनि यहाँ सावधानीसूचक जेब्राक्रसिङ हरेक ठाउँमा हुन्छ, सतर्क भइरहनुपर्ने । सहरको व्यस्त र मारामार कुरुक्षेत्रमा बेलाबेला उँघ्‍न थाल्ने आफ्ना सपनालाई झकझक्याउनु, गाउँ फर्किने भोक पाल्ने मनलाई दिनदिनै सहरिया दौडाहामा घिसारेर खियाउँदै लैजानु, घुमिफिरी अवसरै अवसर र सम्भावनाको ढोका ढकढक्याउँदै रित्तो हात र मनस्थितिमा कठैबरा बन्नु ! सब उपहारमा गनी र उसको पुस्ताले काठमान्डू र अरू सहरको डिग्री नापेका छन् । र नापमा फेल आखिर उनीहरू नै भइरहेका छन्, यो हावापानीमा अनफिट भएकाले । तर हिँड्दाहिँड्दै लोथ भएर गनीले सहरमा विश्राम घरतिर पाइला मोडेको छैन ।
करिब एक दशकको सङ्गतमा काठमान्डूले उसलाई चिन्यो कि चिनेन, उसले भने काठमान्डूको आनीबानी मजाले बुझेको छ, काठ्मान्डूले आफू जस्ता सङ्घर्षका पूजारीलाई भाकल गर्न लगाइरहन्छ, पाती पर्खिरहन्छ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, May 17, 2011
nastik May 17, 2011
yo ni mitho chha.kamsekam malai mithai lagyo hehehe.really nice one.
दीपक जडित May 17, 2011
अन्सारीजीको गजल गजब लाग्यो । हिन्दी भाषाले उर्दु, फारसी साथै अन्य स्थानिय भाषालाई आफ्नैझैं गरि अंगालेको भएर हुनसक्छ हिन्दीका गजलहरुले सहजै तान्छन् मलाई ।
साथमा अन्सारीजीको संघर्षमय परिचयात्मक ब्लग पनि मनपर्यो । हो त चर्चा भएका/चलेकाहरुकै बारे मात्र सबैले लेख्नुपर्छ भन्ने केहि छ र?
सामान्य बिषय र पात्रहरु अघी सारेर पनि यती गहिरो सँग जीवन र यसका आरोह अबरोहहरुलाई केलाउन सकिदो रहेछ तपाईंको यो ब्लग पढे पछीको अनुभुती मेरो। धन्यवाद धाइबा !
really labourious icon,,one of our fren ganie...miss him always with his smile ...
miss u lure kanchho 2